नेकपामा ७० कटेपछि उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था ! – Everest Dainik – News from Nepal
नेकपामा ७० कटेपछि उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था !
काठमाडाै‌, असार २३ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को विधानमा ७० वर्ष पुगेपछि कुनै पनि कार्यकारी कमिटीमा उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग उठेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार सम्पन्न स्थायी समिति बैठकमा स्थायी समिति सदस्य योगेश भट्टराईले विधान र नियमावलीमा १८ बुँदे लिखित सुझाब राख्दै त्यस्तो माग गरेका हुन् ।
सल्लाहकार परिषद् र ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चमा भने उमेर हद खुला राख्न सकिने उनको सुझाब छ । तत्कालीन एमालेले नवौँ महाधिवेशनले केन्द्रीय कमिटीसहित कार्यकारी कमिटीमा ७० वर्ष पुगेपछि उम्मेदवार बन्न नपाउने विधान पारित गरेको थियो ।
उमेर हदकै कारण नेता भरतमोहन अधिकारीले महाधिवेशनबाटै अवकाश लिएको घोषणा गरेका थिए । भट्टराईले लिखित सुझाबमा प्रदेश संगठन कमिटी न्यूनतम २ सय २५ र जिल्ला कमिटी न्यूनतम १ सय ७५ सदस्यीय बनाउने गरी विधान संशोधनको सुझाब दिएका छन् । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
ट्याग्स: Nekapaa, नेकपा, योगेश भट्टराई